Recovery USB File - Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka USB Drive
> Resource > Flash Drive > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka USB Drive
Files lumay drive USB ah. Sidee inuu ka soo kabsado files ka drive USB ah.
Files lumay dhici kartaa sababta oo ah mid ka mid ah fursadaha hoos ku qoran.
1. File ahaa qalad ah tirtiray ka drive USB ah.
2. File la tirtiray sabab u ah qaab aan la filayn.
3. File tirtiray ay sabab u tahay howlgalka munaasib ahayn sida ay u soo baxay si qaldan.
4. Dhismaha xijaab on drive USB ahaa burbursan ama miiska xijaab waa baadil Eebe.
5. Barnaamij kale tirtiray faylka, iyo in ka badan.
Habka 1: Ladnaansho file USB ka gurmad ah
Habka 2: Soo Celinta files tirtiray on drive USB ka Recyle Bin / Trash ah
Habka 3: Ladnaansho file on drive USB ah (free)
Habka 1: Ladnaansho files USB ka gurmad ah
Marka laga badiyay files, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay si aad u hubiso waa haddii aad leedahay gurmad ah on your computer ama warbaahinta kale lagu kaydiyo. Haddii ay jawaabta haa tahay, ma waxaad mar dambe dhibin. Just tagaan si ay gurmad ah oo mar labaad ku wadid aad USB.
Sidaas, samaynta gurmad ah si joogto ah aad u muhiim ah oo waxtar leh.
Habka 2: Soo Celinta files tirtiray on drive USB ka Recycle Bin / Trash ah
Sida aan ognahay, ma jiraan wax Recycle Bin ama Trash on drive USB ah. Sidaa awgeed, marka aad si toos ah uga drive USB tirtiray file ah, laakiinse waa la isku tageen. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan si toos ah u tirtirto file ka wadid aad USB, laakiin waxa ay soo jiiday in Recycle Bin ama Trash on your computer. Markaasay aad waxaa ay si toos ah ugu soo celin kartaa.
Haddii aad u dhacay si aad u hesho Recycle Bin si ay qashinka ka shubeen, waxaad weli fursad uu ku soo kabsado files ka Recycle Bin / Trash, laakiin waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan qalab dhinac saddexaad. Iska akhriso on. Waa habka 3 ee hoose.
1. Recuva (version Windows a)
2. PhotoRec (versions Windows iyo Mac)
3. Soo Celinta (Windows)
4. Wondershare Data Recovery (Versions Windows iyo Mac)
Faa'iido: Free, si sahlan loo isticmaalo undeleting; waxaa ka mid ah feature ammaan-tirtirto. Version qaadan karo waddaa ka ul USB. Qasaarooyinka: Ma aha sida awood badan sida-gadashada kale oo; ayaa sheegay faylasha sida "unrecoverable" in weli yihiin disk adag in meel la mid ah.
Recuva waa utility a free-u-u-download in kabanayso files tirtiray ka shiidaa disk kasta oo Windows ka akhrisan kartaa. Taas macnaheedu waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo kabsado files tirtiray ka wadid aad USB, inta ay la akhrisan kartaa by your computer. Recuva waa effortless in la isticmaalo, la interface soo jiidasho leh in aad si fudud u eegi kartaa.
Waxaa halkan Download: http://download.piriform.com/rcsetup149.exe"
2. PhotoRec (Windows iyo Mac versions)
Faa'iido: software Free. Edbinta oo cad. Waxa aanu si dhab ah u shaqeeyaan. Qasaarooyinka: Falanqeynta No. Ka shaqeynta Terminal cabsiiyo laga yaabaa in dadka qaar ka mid ah.
PhotoRec waa ammaan in la isticmaalo, oo waa inuusan marna isku dayi doonta in ay qoraan inay taageero drive ama xasuusta ku saabsan inuu ka soo kabsado, waxaad tahay. Files soo kabsaday yihiin halkii ku qoran tusaha ka halkaas oo aad barnaamij PhotoRec ah. Si aad u soo kabsado files ka disk adag, muhiimka ah USB, Smart Card, CD-ROM, DVD, iwm, waxaad u baahan tahay xuquuqda ku filan si ay u helaan qalab jirka.
Faa'iido: Aan dib u soo celineysa kaliya. Sidoo kale tirtiro. Tirtiro oo wax walba oo ku saabsan baabuur gaar ah ee 1 Guux. Waxa uu ka shaqeeyaa baruurtii iyo sidoo kale NTFS. Qasaarooyinka: waxoogaa yar ee interface qalaad (la 'Others'-button for' Delete Gebi 'iyo badhanka gabi ahaanba ka duwan for' Soo Celinta by koobiyo '). Sida haddii aan tirtirka / Tirtirin ahaa u jeclaysteen in. No HELP oo dhan.
Soo Celinta waa utility yar weli fudud la qaadi karo oo kuu ogolaanaya in ay tahay user si loo soo celiyo ama ka soo kabsadaan files in la soo saaro Windows ama la tirtiro ka Recycle Bin. Soo Celinta sidoo kale loo isticmaali karaa inuu ka soo kabsado sawirada lumay iyo faylasha kale MISC warbaahinta la qaadi karo sida USB flash drives, drives adag iyo kaararka flash is haysta sida caadiga ah loo isticmaalo oo ay ugu digital camera ee.
Waxaa halkan Download: http://www3.telus.net/mikebike/Restoration.zip
Faa'iido: Easy in ay isticmaalaan la interfaces saaxiibtinimo. Safe si ay u isticmaalaan, akhriyaan oo kaliya. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh hor soo kabashada. Siinta version Fidmo iskaanka iyo xogta jeegga. Qasaarooyinka: Waxaad u baahan tahay inaad bixiso markaad soo kabsaday files.
Wondershare Data Recovery ayaa labada versions Windows iyo Mac, kaas oo u ogolaanaya in aad ka bogsato files ilaa 550+ qaabab. Waxaa u shaqeeya badan oo qalabka, sida kombiyuutaro, laptops, drives adag dibadda, drives USB, kamaradaha, ciyaartoyda MP3 / MP4, oo sidaas. Laba hababka soo kabashada waa badan bilowga computer iyo militarigii hore.
Waxaad daawan kartaa tutorial video ah soo kabsaday files USB adigoo isticmaalaya Wondershare Data Recovery hoos ku qoran.